Hogaanka AMISOM Oo ku Dhawaaqay Cida Lagu Wareejinayo Amniga Somalia – War La Helaa Talo La Helaa
Hogaanka AMISOM Oo ku Dhawaaqay Cida Lagu Wareejinayo Amniga Somalia
Shaaciye.com-Hogaamiyayaasha wadamada ciidamda midowga Africa ee Amisom ee nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeyn in ay ansixin doonaan diyaar garowga ah in Soomaaliya ay la wareegto masuuliyada Amniga guud ahaan Soomaaliya ayaa lagu yiri war kasoo baxay hogaamiyayaasha ciidamda AMISOM ee kusugan Soomaaliya.
Kulankan ay isugu yimaadeen korjoogayaal caalami ah iyo Qaramada Midoobey iyo wafdi uu hogaaminayo La taliyaha dhanka amniga dowlada soomaliya Abdi Said Muse Ali ayaa waxaa uu ka sheegay kulankaasi in dowladda Soomaaliya ay leedahay siyaasad udagsan kaa oo ay kudamaanad qaadi karyo amniga guud ahaan Soomaaliya.
Qorshaha lagala wareegayo amniga dalka ciidamada Amisom waaa fursad aad uweyn ee dhanka ciidamada dowlada Soomaaliya sidoo kale waxaan umahad celineynaa taageerada walaalaheena Amisom ee naga siiyeen dhanka amniga sanadihii aynu kasoo gudubnay lkn hada xaaladu waa ay ka duwan tahay sidii hore ayuu yiri la taliyaha dhanka amniga ee Soomaaliya Abdi Said Muse Ali oo kahadlayay kulankaasi.
Wakiilka gaarka ah ee midowga Africa uqaabisan Soomaaliya Ambassador Francisco Madeira oo isna ka hadlay shirkaasi ayaa sheegay in ciidamada Amisom wax badan ay ka soo qabteen amniga guud ahaan Soomaaliya, iyagona deegaano fara badan ay kala wareegeen Al-shabaab kuwaa oo kaashanaya ciidamada dowlada Soomaaliya ayna ku aaman yihiin howsha adag ay ka soo gabteen sanadihii ayku sognaayeen Soomaaliya, balse ka bixitaanka Amisom uu yahay waqti udagsan, maadama aanu jirin dib uhabeyn ku aadan ciidamada dowlada Soomaaliya.
Waxaanu ubaahan nahay inaanu dhisno qaran balse dhisida wadan macnaheedu waxaa ay tahay hada Soomaaliya waxaaa ay ubaahan tahay in masuuliyada dhanka amniga ay lawaregto wanu ugu hambalyeynenaa go’anka adag ay ku gaartay in amniga dalka ay lawareego ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay Ambassador Francisco Madeira oo kulankaasi lagu qabtay magaalada muqdisho qudbad dheer kajeediyay.
In ka badan 10 sano ayaa ciidamo ka socda dowladdaha Afrika iyo kuwa midowga Yurub waxa ay dagaal culus kula jiraan dagaalyanada Alqaacidda faraca ka dagaalama gudaha gayiga Soomaaliya.
Madaxweyne Farmaajo oo hambalyo u diray Shacabka Soomaaliyeed munaasabadda 15-ka May